Kooxda Heegan oo garaacday Nationlink+Sawirro
Friday September 25, 2015 - 10:40:20 in Xiriirka Kubadda Gacanta by Nocsom Editor
Kooxaha kubadda Gacanta Heegan iyo Nationlink ayaa ku kulmay garoonka Wiish kulan katirsan wareegga labaad horyaalka kubadda Gacanta Wiilasha.
Kooxda Nation ayaa hogaanka ciyaarta la wareegtay bilowga hore ciyaarta taasoo keentay in Heegan ay soo barbarayn wayo qaybta hore ee ciyaarta waxaana lagu kala nastay 15-11. hogaanka ku hayaan wiilasha Nationlin.
Marki laysku soo laabtay Heegan ayaa dagaal u gashay in ay hogaanka la wareegto waxayna ku qaadatay in daqiiqadihi ugu dambeeya ay si dirqi ah kula wareegto hogaanka waxayna ciyaarta kusoo idlaatay 35-32.
Heegan ayaanan laga adkaan horyaalka waxayna dloonaysaa in ay difaacato horyaalka, balse kulan fiinaal ah ayay la ciyarai ddoontaa kooxda Dekedda.
W/D: Xuseen Maxamed Hadaafow
Nocsom Media Department